विद्यालय प्राङ्गणमा ओली समूहको सभा, सजावटमा बालबालिका प्रयोग - SudurSanchar
February 13, 2021 adminLeaveaComment on विद्यालय प्राङ्गणमा ओली समूहको सभा, सजावटमा बालबालिका प्रयोग
१ फागुन, बुटवल । नेकपा ओली समूहले बुटवलको सिद्देश्वरी मावि प्राङ्गणमा गर्न लागेको आमसभामा झण्डा सजावटमा स्कुले बालबालिकाको प्रयोग भएको छ । स्कूल प्राङ्गणमा आयोजित आमसभाका लागि झण्डा टाँग्न र सजावट गर्न शुक्रबार एक झण्डै दर्जन बालबालिकाहरु प्रयोग भएका हुन् ।
उनीहरुले झण्डा सजावटको काम गरिरहँदा आमसभा आयोजक समूहले रोकेको देखिंदैन । कलिला बालबालिकालाई यसरी राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराइनु बाल अधिकारको हनन् मानिन्छ ।
कलिला बालबालिकालाई राजनीतिक कार्यक्रममा झण्डा प्रयोग गराउँदा भविष्यमा नराम्रो असर पुर्याउने बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे । ‘पहिलो कुरा विद्यालय प्राङ्गणमा यस्ता आमसभा गर्नु नै गलत हो, दोस्रो कलिला बालबालिकाको प्रयोग त अपराध नै मानिन्छ,’ प्राध्यापक पाण्डेले भने, ‘कलिलो उमेरमा पार्टीका झण्डा बोकाउँदा र प्रयोग गराउँदा बाल मस्तिष्कमा गहिरो छाप पर्छ र भविष्यमा नकारात्मक असर पर्छ ।’
होमपेज / समाचार / प्रदेश ५
२०७७ फागुन १ गते १०:४८ मा प्रकाशित
facebook sharing buttontwitter sharing buttonmessenger sharing buttonwhatsapp sharing button
माघ २३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ओली समूहको आमसभामा अपेक्षाकृत जनसहभागिता नभएपछि ओली समूहले तुलनात्मकरुपमा बलियो पकड भएको मानिने बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको हो । सो समूहका नेताहरुले बुटवलको आमसभा अहिलेसम्मकै ठूलो र ऐतिहासिक हुने दावी गर्दै आएका छन् । आमसभामा रुपन्देहीबाट एक लाख र अन्य जिल्लाबाट एक लाख गरी दुई लाख जनता उतार्ने सो समूहका लुुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज एवं मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।
आसभालाई नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सभामा पूर्वजनमुक्ति सेना पनि सहभागी गराउने सो समूहले बताएको छ ।
प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि बुटवलमा यही माघ १५ गते ठूलो सभा गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन ओली समूहले पनि बुटवलमै ठूलो सभा लागेको हो । बुटवलको सभाले प्रचण्ड नेपाल समूह हौसिएको थियो ।
बुटवलको सभालाई ओली समूहले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको रुपमा लिएको छ ।
नेपाली भूमिमा भारतीय तस्करको हर्कतः प्रहरीमाथि भाला आक्रमण!!
सरकारले सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएपछी पुर्वराजाको चुनौती !
८७ बर्षिय बृद्दालाई ब’लात्का’र गर्ने युवक प्रहरी हि’रास’तमा
बढैयाताल गाउँपालिका उपप्रमुख दिपा गौतमलाई को’रोना सं’क्रम’ण पुष्टि
बिश्वकै सबैभन्दा सानि इनिस्पेक्टर नेपालमै ,देशको सुरक्षा गर्छु (हेर्नुस् भिडियो May 13, 2021